भेटियो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’, जोखिममा नेपालीहरु हेर्नुहोस्। – Samriddhakhabar
December 3, 2021 December 3, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on भेटियो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’, जोखिममा नेपालीहरु हेर्नुहोस्।
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ मलेसियामा पनि फेला परेको छ । त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्री खैरी जमालुद्दीनले शुक्रबार दक्षिण अफ्रिकाबाट नोभेम्बर १९ मा मलेसिया आएका विदेशी नागरिकमा नयाँ भेरियन्टको संक्रमण भेटिएको बताएका हुन्।
संक्रमित व्यक्ति फेला परे पनि कुन देशका नागरिक हुन् भन्ने विषयमा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छैन ।रोजगारका शिलशिलामा काम गर्न पुगको नेपाली श्रमिकहरु भने नयाँ भेरियन्टको जोखिममा परेका छन् । हाल मलेसियामा कम्तिमा ४ लाख नेपाली श्रम गरिरहेका छन् ।
विश्व स्वास्थय संगठनले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ख’त’र’नाक रहेको भन्दै सचेत रहन सबै देशलाई अपील गरिसकेको छ । दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट फैलिँदै गएको छ ।
यो पनि पड्नुहोस।।सर्वोच्च अदालतलाई बन्ध’क बनाउन नहुने भन्दै अधिवक्ता चुँडाल फायर, न्यायाधीशहरुमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाए।
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपाल बारले गलत उद्देश्य राखेर न्यायालयलाई नै अस्तव्यस्त गराउन आन्दोलन गरेको भन्दै स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरुले प्रतिकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले आज (शुक्रबार) पनि बारको आन्दोलनविरुद्ध प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरुले नयाँ बानेश्वरस्थित् एभरेष्ट होटल अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उक्त प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै अधिवक्ता भूमिनन्द चुँडालले सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथा लागु भएपछि पनि अदालतमा अवरुद्ध गरिनु गलत भएको विचार राखे । उनले हड्ताली न्यायाधीशहरुविरुद्ध कडा असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनले बेन्च बस्न नभ्याउने भए के दिनभरि उठेरै बसे ? आफ्नो बेन्चमा बस्न नि नसक्ने कस्तो श्रीमान्‌हरु ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
उनले अदालतमा अवरोध जारी राख्दा जनताले ठूलो मार भोग्नुपरेको पनि चिन्ता व्यक्त गरे । चँुडालले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा २४ घण्टा हेर्नु पर्नेमा त्यसो नगर्दा ३०(३५ दिनसम्म पालो आउने कि नआउने भन्ने अन्योल रहेको र गैरकानुनी रुपमा नागरिकहरु थुनिएको र हिरासतमा रहेको अवस्था पनि सुनाए ।
उनले बारले गलत नियत राखेर आन्दोलन गरेको भन्दै सर्वसाधारण जनताबाट पनि आलोचना हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा अब आफूहरुले बारकै प्राङ्गणमा उभिएर चूनौति दिने अवस्थामा पुग्नेपनि चेतावनी दिए । चुँडालले आफुहरु स्वतन्त्र कानून व्यवसायी भएकोले स्वतन्त्र न्यायापालिकाको गरिमा जोगाउनको लागि जस्तासुकै संघर्षमा पनि उत्रिन तयार हुने चेतावनी दिए ।
घट्ने भयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, शुक्रबार नयाँ मूल्यसूची सार्वजानिक गर्ने तयारी
कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई भर्खरै आयो यस्तो सूचना । सबैले हेर्नुहोला ।
July 27, 2021 खबर समृद्ध
बुटवलमा विपन्न परिवारलाई निःशुल्क ५ बाख्रा र खोर
July 14, 2021 July 14, 2021 खबर समृद्ध
गुल्मी जिल्लाको आजको कोरोना अपडेट हेर्नुहोस्।
July 7, 2021 खबर समृद्ध